Ucebisa iChiefs ukuba ibuyele ebholeni layo owaduma Osuthwini - Impempe
Ucebisa iChiefs ukuba ibuyele ebholeni layo owaduma Osuthwini
June 5, 2021 Impempe.com
UReneilwe Letshoenyane esadlala kwiKaizer Chiefs
UDABA: Alfred Ngubane
UTsepo Ntsoane ukhomba ukukahlwa kwesiko leqembu kwiKaizer Chiefs ngokuthi yikho okwenza leli qembu lizithole selilwela ukungena kwiTop 8. UNtsoane, owadlala kuMaZulu, Golden Arrows neManning Rangers Phakathi kwanye amaqembu, uthi iChiefs yayaziwa ngabadlali basesiswini abalawula umdlalo.
Kodwa manje akusekho lokho futhi yingakho Amakhosi esehlelwe yizinga ngendlela yokuthi kule sizini ake amataniswa nezembe. Nokho avukile ekugcineni agcina engine ngisho kwiTop 8 ngemuva kokushaya iGolden Arrows neTS Galaxy emidlalweni emibili yokugcina.
Lokhu kwenzeke ngemuva kokuthi sekubambe u-Arthur Zwane noDillon Shepard ekucijeni leli qembu sekuxoshwe uGavin Hunt. Kodwa uNtsoane uyisola emuva le nkinga yaMakhosi.
“Imfihlo yeChiefs beyihlezi isenkabeni yenkundla,” kusho uNtsoane exoxa neMpempe. “Ngesikhathi ngisadlala kuMazulu ngonyaka ka-1990, kwakunzima kakhulu ukubhekana naMakhosi ngenxa yesisu sayo esasiqinile.
“Sasibophele izinkakha ezifana noFetsi “Chippa” Molatedi, Wellington “Munt’akalahlwa” Manyathi, Doctor “16V” Khumalo, Donald “Ace” Khuse noNeil Tovey.
“Kwakunzima ukuhlula Amakhosi ngalezo zikhathi ngoba ayeqine kakhulu esiswini enza kungadlaleki,” kuchaza uNtsoane. Uthi leli siko labadlali abakwazi ukulawula umdlalo luphele ngesikhathi kudedelwa uReneilwe Letsolenyane.
“Kugcine ngo Reneilwe Letsolenyane noTinashe Nengomasha ukuba anabadlali abakwazi ukulawula isisu. Abadlali abakwazi ukusuka emuva baye phambili nebhola.
“Uma bengakhumbula bese bebuyela kulolu sikompilo Amakhosi angakwazi ukubuyela lapho ephuma khona. Uyabona kumanje njengoba bezosayina abadlali, kumele baqinise kakhulu kubadlali basesiswini ngoba yilapho benamandla khona.
“Ngicabanga ukuhlehlisela emuva abadlali bakudala abazi usikompilo kuyawalimaza kakhulu lamaqembu amakhulu. Buka kula masizini amabili kube nzima kwi Chiefs, beyibhotshozwa esiswini kube lula ukuthi amanye amaqembu afinyelele kubadlali bayo basemuva,” kuchaza uNtsoane.
Previous Previous post: ISundowns ibongelwe nangumengameli weFIFA ngokudla isicoco seligi
Next Next post: Usenalo ithemba lokuhlenga iChippa uSeema